Mametraha visy: inona izany ary ny fampiharana | Fitaovana maimaim-poana
Mametraha visy: inona izany ary ny fampiharana
Betsaka ny karazana visy eny an-tsena, ny sasany malaza ary ny sasany somary hafahafa kokoa, manokana ho an'ny fampiharana manokana. Iray amin'ireto karazana ireto ilay ilay antsoina hoe «écouteur», izay hanokanay an'ity lahatsoratra ity hilazana izay rehetra ilainao ho fantatra momba an'io karazana io sy ny fomba hanampiany anao amin'ny Tetikasa DIY.
El napetraka visy Izy io dia karazana visy tena izy izay ampiasaina amin'ny fampiharana azo ampiharina izay efa hitanao indraindray. Ohatra, ny zavatra voalohany tonga ao an-tsaina ankehitriny dia ny fanilo na jiro eny an-dalambe, izay matetika ampiasaina hitazonana ny ampahany amin'ireo jiro ireo rehefa esorina ...
Tsy mora amin'ny maro ny manavaka ny bolt sy ny visy. Ny fahasamihafana misy eo amin'izy roa dia mety hampifangaro, fa ny tena maha samy hafa azy dia ao amin'ny kofehy sy ny habeny. Bolts mazàna dia lehibe kokoa ary tsy misy tendrony farany. Kely sy maranitra ny visy.
1 Inona no atao hoe visy?
2 Karazana visy
2.1 Araka ny voalazan'ny lohany
2.2 Araka ny fitaovana visy
2.3 Araka ny vita
2.4 Araka ny fiasa
Inona no atao hoe visy?
Un napetraka visy Izy io dia varingarina vy na tsorakazo misy kofehy izay misy ny kofehy voasokitra mandritra ny halavany. Izany hoe tsy misy lohany toy ny visy hafa. Ny hany maha samy hafa ny tendrony dia ny iray amin'izy ireo dia antsoina hoe faka ary hasiana ho any anaty loaka misy kofehy ary ny faran'ny iray hafa dia matetika no misy otelo voasokitra mba hifanaraka amin'ny visy (mety ho lakilen'i Allen ihany koa) ny fikorisana na ny famongorana .
Ny mahasoa an'io karazana visy io matetika no fixation ampahany sy ny fametrahana ny singa raikitra sasany amin'ny zavatra azo esorina. Ohatra, alao sary an-tsaina ny ampahan'ny fantsona iray izay miditra amin'ny fantsona hafa. Ny fantsona ivelany dia misy loaka misy kofehy ahafahana mampiditra ireo visy ireo hanerena ny fantsona anatiny, ka mitazona ilay fantsona anatiny.
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny visy napetraka sy fomban-drazana dia mitoetra indrindra amin'ny fisiognomy-ny sy ny hery anaovana azy. Amin'ny nentim-paharazana iray, dia hitanao tokoa fa manohina tsikelikely ianao, fa ny lohany (indrindra raha vita amin'ny varahina, aliminiana na firaka malefaka hafa, ary indrindra rehefa ampiasaina tsy misy fifehezana ny drills sasany) dia mety hiharatsy noho ny heriny . Izay no tsy ahafahana misintona azy na manindry azy ...
Ao amin'ny visy napetraka, ny ampahany anaovana ny varavarana dia tafiditra ao anaty visy mihitsy, tsy misy lohany. Noho izany dia izy irery ihany iharan'ny familiana ihany. Ho fanampin'izany, mazàna vita amin'ny vy izy ireo ho fanoherana bebe kokoa.
Misy maro karazana visy mihoatra ny visy napetraka, ary azo sokajiana arakaraka ny anton-javatra samihafa ...
Araka ny voalazan'ny lohany
Araka ny ny endriky ny loha ao amin'ny visy dia misy:
misy lafiny enina: Matetika izy io ary matetika ampiasaina amin'ny fametahana na ny fametrahana ny faritra misy tsindry. Matetika koa izy ireo dia manana voanjo. Ary tsy izy rehetra dia azo hamafisina amin'ny alàlan'ny socket na wrench, ny sasany koa dia misy fantsom-biriky. Ohatra, ny hex flange screw dia matetika manana loha kintana, ary ny tombony lehibe indrindra dia tsy mila mpanasa lamba izy.
Loha maloto: izy ireo no be mpampiasa indrindra, ireo mamela ny fampiasana visy visy. Misy azy ireo miaraka amin'ny lalotra fisaka, salantsalotra sns. Izy ireo dia mety tsara rehefa tsy mila fanamafisana lehibe, toy ny singa hazo. Na izany na tsy izany dia mijanona ivelany ny loha, na dia atao counter counters aza dia azo afenina.
Loha toradroa: tsy dia matetika toy ny teo aloha izy ireo. Izy ireo dia ampiasaina amin'ny tranga izay ilana fanamafisana lehibe toy ny hexagonal. Ohatra, amin'ny fanamboarana fitaovana fanapahana na faritra mihetsika amin'ny milina sasany.
Lohan'atsoy na boribory: mazàna misy hexagon ao anatiny izy ireo mba hampiditra lakile Allen na karazana hafa. Izy ireo dia ampiasaina amin'ny tonon-taolana izay mila fanamafisana avo lenta. Manararaotra mamaritra ity karazana loha ity aho:
fisaka- Tsy misy afa-tsy slot iray ao an-dohan'izy ireo amin'ity karazana visy ity.
Kintana na lakroa: izy ireo no ilay antsoina hoe karazana Phillips.
Pozidriv (Pz): tena mitovy amin'ilay teo aloha, fa manana lakroa lalindalina kokoa ary marika ambonimbony hafa izay manome endrika asterisk.
torx- Tsy fahita ireo, fa azo ampiasaina amina rindrambaiko hazo sasany, sns. Ny lohany dia manana fitsaharana miendrika kintana tsy fahita firy.
ny hafa: misy hafa toa ny vera na kaopy, Robertson, Tri-Wing, Torq-Setm, Spanner, sns.
lolo: Araky ny anarany dia manana karazana voanjo misy "elatra" miendrika lolo izy mba hahafahana manenjana amin'ny tananao manokana. Ho an'ireo tranga izay tsy dia ilaina loatra ny tiro ary mila apetaka sy esorina matetika.
Araka ny fitaovana visy
Etsy ankilany, raha ny visy fitaovana Manana:
Ny alimo: tsy mahazaka ezaka loatra, fa mahatohitra ny toetr'andro sy ny hazavana. Mety amin'ny plastika sy hazo.
Duralumin: vita amin'ny aliminioma mitambatra amin'ny metaly hafa toy ny chromium izy ireo. Mampitombo ny faharetany izy ireo.
vy: matetika vy vy io, ary mahery izy ireo.
plastika- Mahalana ireo, fa misy mahazaka tsara ny toetran'ny hamandoana tafahoatra, toy ny fantson-drano.
varahina: Manana loko volamena izy ireo ary tena mahazatra amin'ny fampiasana hazo. Mahery izy ireo, nefa tsy matanjaka toy ny vy.
Araka ny vita
Mety misy koa ireo visy ireo famaranana samihafa:
Kadmioma: manana endrika volafotsy izy ireo, manana fanoherana tsara amin'ny toe-javatra samihafa izy ireo ary rehefa mampidina azy io dia tsy miteraka vokatra azo avy amin'ny harafesina.
tafo: fandroana zinc no ampiasaina ary manana volafotsy ihany koa ny endriny, na dia azo tsikaritra aza ireo tasy zinc mahazatra. Mifanohitra tsara amin'ny toetry ny harafesina.
Tropicalized: manana loko mavo iridescent izy ireo. Vita amin'ny alàlan'ny famaranana vita amin'ny galvanaly sy chrome izany. Mampitombo kokoa ny fanoherana ny harafoana izany.
Nikelika nopetahany takelaka: Manana famaranana volamena manjelanjelatra noho ny famaranana nikela. Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny famaranana haingon-trano.
Nopetahana takela-barahina- Ny varahina dia ampiasaina ary manana endrika metaly mamirapiratra ho an'ny famaranana haingon-trano sy fanoherana ny harafesina.
Phosphatized: mandro amin'ny asidra phosorika amin'ny alentika izy ireo ary manome endrika mainty fotsy.
Bluing: semi-glossy izy ireo miaraka amin'ny loko mainty lalina. Izy ireo dia iharan'ny fanamafisana ny vy izay mamoaka an'io sosona mainty io izay mahatonga azy ireo hahatohitra kokoa ny hakamoana.
voalokoNy sasany dia nohokoina mba haingo kokoa, ohatra ny visy mainty ampiasain'ny fanaka hazo sasany.
Araka ny fiasa
Araka ny ny fiasa ny visy dia azo soratana amin'ny:
Fikarohana manokana sy fandavahana tena- Ampiasaina amin'ny vy vita amin'ny vy sy hazo mafy. Maranitra izy ireo ary afaka manapaka ny lalany manokana amin'ny alàlan'ny fitaovana.
Kofehy hazo: tsy toy ny teo aloha, tsy manana kofehy voasokitra amin'ny halavany izy ireo, fa kosa manana ampahany amin'ny visy tsy miasa. Izy ireo no visy lagika mahazatra ho an'ny hazo izay ny kofehy dia 3/4 fotsiny amin'ny visy. Izy ireo koa dia manana teboka maranitra ary afaka manapaka ny fombany manokana.
Miaraka amin'ny voanjo: Tsy misy dikany izy ireo, ary mampiasa voanjo hanatevin-daharana ny ampahany amin'ny tsindry mafy. Azo ampiasaina amin'ny mpanasa lamba ihany koa izy io, ka manamafy ny fipetrahan'ny voanjo sy loha.
Mametraha visy na pataloha: (ilay voalaza etsy ambony)
setrasetraina: Karazana visy ho an'ny rindranasa fiarovana izay voahidy ary tsy azo esorina. Ny ampahany ihany no azonao terena. Natao ho an'ny faritra miharihary amin'ny besinimaro izy ireo, ka manakana azy ireo tsy ho voafitaka.
ny hafa: izy ireo koa dia azo ampifanarahana amin'ny rindrambaiko avo lenta kokoa, fanoherana avo lenta (marihina miaraka amina lohateny TR eo amin'ny lohany), sns
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitaovana maimaim-poana » Fanontana 3D » Mametraha visy: inona izany ary ny fampiharana
DXF: inona no tokony ho fantatrao momba ity endrika fisie ity
Mpihetsika Linear ho an'ny Arduino: mekatronics ho an'ny tetikasanao